इन्द्रेणीमा कमला घिमिरे र शिशिर भण्डारीको घमासान दोहोरी भिडन्त ! – दैनिक नेपाल न्युज
इन्द्रेणीमा कमला घिमिरे र शिशिर भण्डारीको घमासान दोहोरी भिडन्त !
प्रकाशित द्वारा: सोमवार, भदौ २३, २०७६
यतिबेला निकै चर्चामा आएकी बाल प्रतिभा कमला घिमिरे काठमाडौंबाट घर फर्केकी छिन् । उनी शनिबार इन्द्रेणी कार्यक्रममा दोहोरी गाउन काठमाडौं आएकी थिईन् । चर्चित गायकहरु राजु परियार, समाजसेवी तथा कलाकार शिशिर भण्डारी लगायत अन्य धेरै कलाकारहरुसँग गीत गाएर सबैलाई चकित पारेकी कमलाको तारिफ चर्चित गायक राजु परियारले पनि गरे ।
ठाउँको ठाउँ दोहोरीका राम्रा राम्रा टुक्काहरु बनाउन सिपालु कमलाको यो प्रतिभा देखेर यतिबेला सबै चकित छन् । यसैबिच उनले इन्द्रेणीमा सबैलाई कायल पारिन् । राजु परियारलाई त उनले टिकि खान दिईनन् भने शिशिर भण्डारीसँग पनि उत्तिकै खरो रुपमा प्रस्तुत भईन् । यसैबिच आज धादिँग फर्कनुअघि कमला बिरामी परेको बताईन् । उनले गाडीको यात्राका कारण आफु बिरामी परेको भन्दै सबैसँग गीत गाउन नसक्ने भन्दै माफी मागिन् । यसैबिच शिशिर भण्डारी र कमला नानीको लाईभ दोहोरीको भिडियो आएको छ । हेर्नुहो..कसरी इन्द्रेणीमा यि दुईको भिडन्त पर्यो ।
डोरियन आँधीबाट बहमास भग्नावशेषमा परिणत, स्थानीयबासीको संघर्ष जारी
रुपन्देही अजिङ्गरको उचित बासस्थान